October 1, 2011 by chowutyee KFC ကြက်ကြော်
ချက်ပြုတ်နည်း ၁။ အရင်ဆုံး ကြက်သားကို နုပ်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ( အချိုမှုန့်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ ဆား၊ ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်၊ ကြက်ပြုတ်ရည်) တို့ဖြင့် သမအောင် နုယ်ပြီ အနည်းဆုံး ၂၄နာရီ တစ်ညသိပ်ထားပေးပါ။
Posted in အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း | 44 Comments	44 Responses
ဟုတ်ကဲ့ မခင်ယမုံ လုပ်စားကြည့်ပါနော်..🙂
Thanks Friend!! I will try it.. Thanks you so much!😀
Wowww I love KFC and I really going try and treat me too🙂
Thanks Wut Yee to reply😀
ဘေးနားက အားလူးကျော် ကျော်နည်းလေပါ ကျေးဇူးပြုပြီးေ၇းပေးပါလာနော်😉
အာလူးကြော်က ဆားလေးထည့်နုယ်ပြီ ကြော်ရုံပါပဲ နှင်းဖြူ….😀
Thanks Me Me!!😀
I will post this recipe soon!!🙂
ညီမ ကြက်သားအစိမ်းကို နုပ်ရမှာပါ။ ကြက်ပြုတ်ရည်ကတော့ ရှိရင်ပေါ့၊ မ၇ှိရင် ရိုးရိုးေ၇ပဲ ထည့်လို့ရပါတယ်..🙂
ကြက်ကြော်တဲ့အခါ မီးကို အသင့်တင့်နဲ့ကြော်မှ အပြင်ရော၊ အထဲပါ ကျက်တာ ညီမ။ မီးအရမ်းပြင်းရင် အပြင်ပဲ ကျက်ပြီ အထဲက မကျက်တော့ဘူး.. Plz try it again..😀